Booliska Mozambique oo baaraya cidda soo abaabusha dilalka ragga bidaarta leh - BBC News Somali
Booliska Mozambique oo baaraya cidda soo abaabusha dilalka ragga bidaarta leh
Booliska gobolka Zambezia ee bartamaha dalka Mozambique ayaa sheegaya in uu ballaarinayo baaritaannada ka dhanka ah sare u kaca dilalka loo gaysto ragga bidaarta leh.
Tan iyo bishii la soo dhaafay ayaa waxaa dalkaasi lagu dilay dhowr nin oo bidaar leh.
Booliska ayaa ka shakisan dadka wax ku dabiiba dawo dhaqameedka in ay faafinayaan warar aan sal lahayn oo ah in dahab uu ka buuxo madaxyada ragga bidaarta leh, iyagoo rajaynaya in madaxyadaasi loo keeni doono si ay ugu curaaftaan oo ay qeyb ahaan ugu isticmaalaan daweyntooda.
Ilaa iyo haatan booliska ayaa waxa ay soo xireen afar qof oo lagu eedeeyay inay dileen rag bidaar leh, haatanna waxa ay baacsanayaan dadka soo abaabulay weerraradan lagu bartilmaameedsanayo ragga bidaarta leh.
Afhayeen u hadlay booliska gobolkaasi Zambezia ayaa sheegay in inta badan dadka dambiilayaasha ah ee falalkan ku kaca ay ka yimaadeen dalalka dariska ah.
Booliska deegaanka ayaa sidoo kale ka walaacsan dilalka ka dhanka ah dadka Albinaha loo yaqaan ee jirkooda uu ka maqan yahay maadada midabka keento, iyadoo lagala baxayo qaar ka mid ah unugyadooda jirka, arrimahaasi oo dhammaantood ah kuwo ku yimid curaaf ama in lagu faashado.